Internetka iyo wadaagista: laba fure oo loogu talagalay isticmaalka wax ku oolka ah ee GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Maqaalkaan waxaa qoray saaxiibkiis Beesha Software-ka Cuba ee Bilaashka ah waayo Xariirka GUTL oo waxaan rabaa inaan halkaan ku keeno si aan kuu tuso mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee isticmaalka Software Free: "Wadaag".
By: Delio G. Orozco Gonzalez.
Agaasimaha Diiwaanka Taariikhda.
Manzanillo oo reer Cuba ah.
Khadadkaasi waxay ku qoran yihiin kombuyuutar laptop ah oo summadaysan XASEE, oo leh kaarka fiidiyowga: Nidaamyada Isku-dhafan ee Silicon [SiS] 771/671 PCIE VGA Adapter Adaptive (rev 10) , mid ka mid ah ikhtiraacyada dhifka ah ee madaxdeenna uga tagaya gubashada; nidaamka qalliinka ee nolosha siiya waa Debian 6, erayga processor waa LibreOffice 3.4.4 oo waxaan ku faraxsanahay in qaraarku yahay mid u dhashay alaabtaas: 1280 × 800.
Markii ay timaadday awooddayda, nooc ka mid ah Windows XP Weligay ma arag, waxay ahayd mid ka mid ah caadooyinkaas badan, waxaan u maleynayaa habka loo dayacay, taas oo shaki la'aan na caawisay mar uun maxaa yeelay muhiim ma ahayn in la kala jaro. La qabatimay sida aan ahay falsafada SWL, ma ahan mid xamaasad leh, taas oo ka timid xamaasadda ilaa "fanoso" -xikmad baa lagu dhahay saaxiib horaa u dhintay-, ma jiro hal talaabo oo dheeri ah, waxaan go aansaday in aan tirtiro ikhtiraaca Bill Gates iyo rakibi abuurka ah Ian Murdock; si fiican, mahadsanid midnimo (aqriso wadaag), marka hore Alberto Garcia Fumero iyo kadib Abel meneses iyo asxaabtiisa xarunta Gobolka ee Rudesdal gudaha Granma, waxaan hayaa repo casriyeysan oo qaybintaan aadka u wanaagsan Linux; oo aan loo baahnayn in la sheego - Horeba way uga ogaadeen waaya-aragnimadooda-, haysashada repo maalintii waa, adduunka SWL, isagoo 90% dagaalka ku guuleystay.
Iyadoo go'doominta Debian 6.0.1a gacanta ayaan ku bilaabay hawshaydii wax walbana waxay ahaayeen farxad ilaa daqiiqadii aan isku dayay inaan ka beddelo xallinta shaashadda 14.1 inches, sidoo kale 800 × 600 ma dhicin. Muujinta cabirrada noocaas ah iyo xallintaan, qayb ka mid ah daaqadaha ayaa ka baxsan aagga shaqada, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo dhaqaajiyo kitaabka duudduuban iyo qaabka baahsanaanta ee xarfaha iyo sawirada wax lagu farxo oo dhan. Markaa waxaan aaday repo-kayga, waxaan rakibay darawallo badan sida ay ku lahayd sharraxaaddeeda "sis" laakiin dhammaantood waxay noqdeen wax aan micno lahayn; Kadib waxaan raadiyay feylad leh wax la mid ah "Xorg", si kastaba ha noqotee, waxba kamaan helin, marka laga reebo faylasha qaarkood / usr / share / doc in aysan waxba ka qaban xagga aragtida firfircoon, waxaan qabaa.
Markaas go'aanka ma noqon karo wax kale oo aan ahayn in lagu qoro liiska GUTL iyo, shaqsiyan, asxaabteyda aan aaminsanahay inay i caawin karaan. Qoraalkeyga waxaa looga jawaabay; laakiin xalka midkoodna ma shaqeyn, mana shaqeyn karin maxaa yeelay ma aysan ahayn arrimo dejineed, laakiin darawallada, "laakiin ma aanan ogeyn", sida gabaygii hore ee Enmanuel u yidhi; Si kastaba ha noqotee, macluumaadka la bixiyay wuxuu ahaa mid faa iido leh maxaa yeelay waxaan bartay waxyaabo cusub waana i aaminaa markaan kuu sheego: aqoontu ma cuslaato, mana badna, mana qaadanayso boos oo had iyo jeer waa u qalantaa, way kula socotaa meel kasta oo aad tagtid oo kama duwanaado saabuunta, inta badan adigu waad isticmaashaa, intay sii dhumuc leedahay.
Dalbashada tijaabada iyo nidaamka barashada qaladka, waan ka saaray xerver-xorg-vesa iyo voila!, interface garaafka ayaa la waayey maxaa yeelay aaladda fiidiyowga waxaa soo saaray Nidaamyada Isku-dhafan ee Silicon, lama shaqeeyo isaga xerver-xorg-sis waxa nidaamku keeno; laakiin, leh tan eeg. Hagaag, si uun waa inaan barto waxaad dhihi doontaa, mar labaadna dib ayaan udiiday Debian 6; kahor, waxaan isku dayay Xubuntu 10.04, iyadoo loo habeeyay Debian con Lxde waxa uu sameeyay saaxiibkeen Félix Pupo; laakiin waxba, xitaa shaashadii ugu horreysay uma muuqan.
Marka, waxaan raadiyay macluumaad ku saabsan internetka waxaan helay darawal aan si dhakhso leh oo dhaqso leh ugu rakibo laptop-ka; Waxaan reboot dib u bilaabay laakiin sidoo kale ma aysan shaqeyn, khilaaf ayaa dhacay kaas oo mar kale ka saaray isdhexgalka garaafka Heerka jahwareerku wuxuu ahaa mid igu hogaamiyay go'aan quus ah: rakib Windows 7 Servipack 1 maxaa yeelay - sida ay dhahaan-Baaxadda weyn ee OS-kan waxaa sabab u ah noocyada kala duwan ee darawalada ay taageerto; hase yeeshe, kaarka 771/671 PCIE adabtarada Display (rev 10) waxaa soo saaray Nidaamyada Isku-dhafan ee Silicon arrintu ma sahlana, dadka Silicon Valley kaliya lagu guuleystay in la keeno qaraarka ilaa 1280 × 768 iyo qeexitaanka xarfaha ma aheyn mid kufiican, waxay ahayd in lafilo, soo saaraha ayaa kasameeyay 1280 × 800.
Waqtigan xaadirka ah, fikrad wiiqday ruuxayga: "Waxaan u soo dejinayaa darawalka Windows-ka waxaanan iibin doonaa HASEE faraxsan", ka dib oo dhan, lacagta ka dhalatay ficilka iibsiga iyo iibinta waxaan isku dayi karaa inaan helo kombuyuutar i siin doona madax xanuun yar oo ka dhigo isticmaalka Linux mid ka raaxo badan; In kasta oo ay taasi jirto, oo maadaama aan garwaaqsaday in shimbir gacanta ku jirta ay u qalanto boqol duulimaad, waxaan go'aansaday inaan sameeyo isku daygii ugu dambeeyay. Ka dib waxaan qabtay iso ah Molinux Zero, Isbaanish minimalist distro waxyooday Puppy linux, oo maxaa la yaab igu noqon lahaa markaan arko inuu ku guuleystay inuu qaraarka keeno 1280 × 768 oo leh qeexida higaada oo aad uga sareyso mida ay bixisay Windows 7.
Waxaan dareemay qanacsanaanta guusha, waxaan sameeyay faallooyinka liiska GUTL iyo, dabcan, waxaan helay dhiirigelinta asxaabteyda. Hadda, anigoo niyad sare leh, waxaan dib ugu noqday internetka oo waxaan ka helay cinwaanka http://www.vivaolinux.com.br/index.php, (Bogga reer Brazil), maqaalka cinwaankiisu yahay "Darawal SIS 671/771 + Xorg maaha Ubuntu Lucid Lynx"; Nasiib wanaag, Boortaqiisku waa luqad taariikhi ah, oo ka soo jeeda Latin sida Isbaanishka, iyo furfurista wixii la yiri ma adkaan; Intaa waxaa sii dheer, sharraxaadda ay taageerayaan amarrada iyo jidadku waxay fududeeyeen hawsha.
Qoraaga boostada, Jakson Galeti, wuxuu ku bixiyay iskuxirka si aad u soo dejiso darawalada 32 iyo 64 xoogaa iyadoo kuxiran qaab dhismeedka, feyl aan ka badneyn 265KB (Windows wuxuu culeyskiisu u dhexeeyaa 17 iyo 18 Mbytes), lagu galiyay fayl tar.gz. Halka xalka loo bandhigay Ubuntu, Waxaan qalbigayga ka dareemay inay sidoo kale ka shaqeyn karto distoorka waalidka, sidaa darteedna waxay ahayd, waxaan ku guulaystay inaan ka dhigo kaarka caasiyiinta inuu qaato xalka ugu fiican ee 1280 × 800.
Kani maahan maqaal cilmiyaysan mana ahan inuu noqdo mid lagu xardho gabagabada gabagabada; Si kastaba ha noqotee, waayo-aragnimada lagu sharraxay waxay muujineysaa inay tahay mid isku mid ah oo wadaagista aqoonta iyo marin u helka internetka ay noqonayso isbeddel-dalbasho koowaad oo loogu talagalay isticmaalka wax ku oolka ah GNU / Linux; Miyuu ilaaway sida Torvalds fikirkiisa ugu soo bandhigay dadweynaha mashruucuna u dhashay? Xaqiiqdii haa, waan u mahadcelin doonaa Galeti waxtarkiisa waxaanan dhigayaa casharka wiki ee GUTL maxaa yeelay waan ogahay in asxaab badan aysan marin internetka oo wadaagida aqoonta iyo macluumaadka waxay noqoneysaa qaab-dhismeedka madax-bannaanida falsafadeena iyo maxaa yeelay haddii aysan sidaas ahayn, khadadkaas cinwaankoodu waa liitaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Internetka iyo wadaagista: laba fure oo loogu talagalay isticmaalka wax ku oolka ah ee GNU / Linux
Maqaal weyn, waxaan rajeynayaa in qof kastaa uu u fekerayo oo u dhaqmayo sidan oo kale, maaddaama ay taasi tahay sida aan u bartay waxyar yar oo loo adeegsado Linux.
Kama baaqan karo inaan xuso inaan booqdo bartan maalin kasta maadaama ay waxtar weyn ii leedahay, si aan u ogaado oo aan u xalliyo dhibaatooyinka ka dhex aloosan Debian-kayga.
Shaqada aad qabato waa mid heer sare ah: "laga bilaabo Linux".
Kusoo dhawow patrizio santoyo:
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada, runtii 😀
Waad ku mahadsan tahay booqashada aad na soo dhiibtay ee aad fikradaada ka dhiibatay, runti 🙂
Qiso xiiso leh. Tani waxay kaliya muujineysaa inaadan sameynin sida isticmaaleyaal badan oo ka yimaada Windows, in qaar ka mid ah 'distro' aysan shaqeynin markii ugu horreysay iyo mar ay dhinac iska dhigaan Linux. Haddii aad rabto wax shaqeynaya, ha u qaadanin wax iska fudud, adiguna qaybtaada qaado.
Hambalyo qoraaga aniga iga yimid, runtii sheeko aad u wanaagsan 😉
Wax sidan oo kale ah ayaa igu dhacay waqtiyo tan iyo markii aan ku jiray Linux. Marwalba waxaan dareemay in laygu aqoonsaday kan qoray maqaalka, heh heh.
Runtu waxay tahay in tani ay tahay waxa fiican (in kastoo qaarkoodna ay wax xun sheegi doonaan) adduunka GNU / Linux, marwalba waxaa jira habab wax looga dhigo wax shaqeynaya, qof meel jooga ayaa horeyba u tijaabiyay, iyo xitaa intaa ka sii badan waxyaalaha badan ee aad barato dhanka kale. Sida faallooyin hore sheegay, waxaan dareemay in la aqoonsaday iyo weedha cinwaanka cinwaankeedu si qumman ayuu ugu habboon yahay, maaddaama internetka la'aanteed ay suurtagal tahay in waxaas oo dhami ay noqdaan kuwo si cabsi leh u murugsan.
Sheeko aad uqurux badan. Ha quusan
Intel waxay si rasmi ah u siisaa LibreOffice soo dejintooda AppStore